I-PIVX YAVUNYELWA ECANCUN. | PIVX
I-PIVX YAVUNYELWA ECANCUN.
Indlu yokumkela ikhanyiswa ngezibane zesikhanyiso, isidleke esilungileyo apho ukhulula khona indebe efudumele yobisi lwe-cocoa ezandleni zakho kwaye uzive ukhululekile ukuchitha i-PIVx yakho ngoku. Indawo yokudlela ebizwa iLa Tradicional Churreria, ephakathi kwedolophu yaseCancun, iye yajoyina i-fever ebomvu kwaye ngoku inika abathengi bayo ithuba lokuhlawula nge-cryptocurrency.
UNiels Franklin umnini wendawo, waqhagamshelana no-OneZetty efuna ulwazi oluthe xaxa malunga ne-cryptocurrency kunye ne-blockchain. uNiels wayenomdla kakhulu ukwazi ngakumbi malunga neenzuzo zokwamkela i-PIVX kwishishini lakhe kunye nendlela yokuyisebenzisa ngayo imihla yakhe imihla ngemihla. UNiels wayevile ngeBitcoin kodwa wayengaqinisekanga malunga nendlela esebenza ngayo. Phakathi kwemibuzo awayeyibuza kuOneZetty yindlela yokuguqula i-cryptocurrency kwi-fiat, intlawulo yentlawulo, imibandela yomthetho kunye nobumfihlo. Yonke le mibuzo yaphendulwa ngosizo lukaYukuyyuky, uMaggie Moran no-Pepemarg abagxininisa imizamo yabo ukuze baqinisekise uNiels ukuba aqalise ukusebenzisa i-PIVX kwindawo yokutyela.
I-PIVX inikezela ngokuzimeleyo ngokuzenzekelayo, ukuthengiswa kwangoku kunye nokuqinisekisiwe kunye nokugqithisa okumangalisayo kunye noluntu olubanzi olusebenzayo emhlabeni wonke. Olunye ulungelo lwe-PIVX lububungqina bokuqala bentengo yesigxina evumela bonke abasebenzisi ithuba lokufumana i-perks ngokugcina kuphela nokwandisa imali yabo yemali.
Ukususela ngoku, i-Cancun PIVX yoluntu iya kuba nethuba lokuya eLa Tradicional Churreria, indawo efanelekileyo kwidolophu ukufumana ukutya okuninzi, i-pizza enomnandi, i-pasta kunye neladidi kunye neelongwe ezisekelwe kusetyenziso olungcono kuzo zonke izibonelelo: Ukuhlawula nge-PIVX !!